AGENTI / OEM / ODM - Zhongshan Joineonlux Co., LTD.
Usazviomesera akatungamirira Zvidimbu
Nyoro Neon Mapundu
Rutivi Rwega Rinoburitsa
Kaviri Rutivi Emitting
360 Dhigirii Emitting
Wireless 1st Chizvarwa Anoteedzera
Wireless 2nd Chizvarwa Anoteedzera
Usazviomesera akatungamirira Strips (IP20)
Yakapfava Neon Strips (IP65)
MUMWE / OEM / ODM
Mumiriri / OEM / ODM
Isu tinoramba tichivandudza zvichibva nezvinodiwa nevatengi, takamisa chinzvimbo chinotungamira mukutsvaga, kusimudzira, mainjiniya, uye kushambadzira kweiyo LED yakavakirwa mwenje mhinduro. Vimba nehunyanzvi hwakazara hwekutsvagisa kweLighting, budiriro, mainjiniya, uye kushambadzira, Abestis achiva piyona akangwara weChiedza cheMwenje. Parizvino, zvigadzirwa zvedu nemhinduro zvakatove zvashandiswa munzvimbo dzakawanda dzenyika uye vanhu vanosvika mamirioni pasirese.
Chitsauko chekutanga: Mumiriri weChigadzirwa Chedu
Isu tinoramba tichivandudza zvichibva pane zvinodiwa nevatengi, tasimbisa iyo indasitiri inotungamira nzvimbo munzvimbo ina dzakakura: kuchengetedzeka masevhisi, zvikamu uye masisitimu, basa rehunyanzvi uye termina
Chitsauko Chechipiri: ODM Service
Dzimwe nguva unofanirwa kufunga kunze kwebhokisi, sezvinoonekwa nezvikumbiro zvakawanda zvatakazadzisa mhinduro dzakasiyana dzemwenje. Joineonlux Strip mwenje ndeye Original Equipment Mugadziri, isu tinokwanisa uye tinotarisira kushandira pamwe neyako.
Kucheka Edge LED Technology
Vedu OE / OES vatengi vane mukana kune vane tarenda timu yeinjiniya. Yedu iri-saiti R & D department inoshingairira kutsvaga uye kuyedza zvazvino kufambira mberi mune LED tekinoroji yeprojekiti yako.
Chitsauko Chechipiri: OEM Service
Iko hakuna imwechete-saizi-inokodzera-ese LED mhinduro. Isu tine kugona kuchinjisa maitiro edu uye kugadzirisa chero zvigadzirwa zvedu - kana kukuvakira imwe nyowani - kune ako chaiwo maratidziro.
Yakasimba Supply Chain
Yedu ketani yekushandisa ndiyo musana webhizinesi redu reOEM. Nokusanganisa mashandiro pasi peimwe denga, Joineonlux LED strip light fekitori inopa isingaenzaniswi kujekesa, mhando, uye kukosha kune edu OE uye OES vatengi.
Abest Lighting Mweya "chengeta vimbiso uye edza nepatinogona napo"! Tsika yeAbest yakadzika midzi mu Abest vashandi moyo, uye inopa simba kune Abest kusimudzira kusimudzira.